ဧပြီလထက်ပိုကြမ်းမယ့် မေလရဲ့ Watch List (ရုံတင်မယ့်ဇာတ်ကားများ) | Duwun
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလကတော့ Avengers: Endgame, Shazam! စတဲ့ Superhero ကားတွေရဲ့ လဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလကတော့ Avengers: Endgame, Shazam! စတဲ့ Superhero ကားတွေရဲ့ လဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမေလမှာတော့ ဧပြီလထက်ပိုကြမ်းတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ရုံတင်ဖို့ ရှိပါတယ်။ဘယ်လို ကြမ်းမှာလဲ? ဘာရုပ်ရှင်တွေလဲဆိုတာတော့ အောက်မှာ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
(1) John Wick: Chapter3– Parabellum
John Wick ကို မသိသူ မရှိကြဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။အကယ်၍ သင်ဟာ John Wick Movie တွေကို မကြည့်ဖူးဘူးဆိုရင်တော့ စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းပြီး အမိုက်စား အက်ရှင်ကားကောင်းကောင်း ကြည့်ရတဲ့ အခွင့်အရေးကို ဆုံးရှုံးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ John Wick Chapter3မှာဆိုရင်တော့ နိုင်ငံကျော် ကြေးစားဂိုဏ်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကို သတ်ပြီး ထွက်ပြေးနေတဲ့ John Wick တစ်ယောက်ကတော့
ကြေးစား လူသတ်သမားတွေ နောက်ကလိုက်တာ ခံနေရတာပါ။ John Wick နဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားတွေနဲ့ ဘယ်လို တိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ရှုစားရမှာပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ မေလ (၁၆)ရက်မှာ စတင်ပြသသွားမှာပါ။
(2) The Hustle 2019
Female Con Artist နှစ်ယောက်က သူတို့နဲ့ အတိတ်ရန်ငြှိုးရှိခဲ့တဲ့ လူချမ်းသာတစ်ယောက်ကို လက်စားချေဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ Action သက်သက်မဟုတ်ဘဲ ဟာသကား ဖြစ်တာကြောင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ မိသားစု အပန်းဖြေ ကြည့်နိုင်မယ့် ဇာတ်ကားမျိုးပါ။အားလုံး သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ Rebel Wilson နဲ့ Anne Hathaway တို့ အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ ရုပ်ရှင်ကြာချိန်က တစ်နာရီ နဲ့ ၃၄ မိနစ်ကျော်ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပြီး မေလ(၉)ရက်နေ့က စတင်ပြသနေတာပါ။
(3) Aladdin 2019
မေလ (၂၄) ရက်မှာ ရုံတင်ပြသမယ့် Aladdin ကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ဖူးတဲ့ Aladdin ကာတွန်းကို Live Action ပြန်ရိုက်ထားတာပါ။ Aladdin တစ်ယောက် အစွမ်းရှိတဲ့ မီးခွက်ကို ရှာတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် စွန့်စားခန်းတွေကို ရှုစားရမယ့် ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ခုပါ။ ပျော်စရာ၊ ရင်ထိတ်စရာ၊ ဝမ်းနည်းစရာစတဲ့ ခံစားချက်ပေါင်းစုံ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ပြသချိန်ကတော့ ၂နာရီနဲ့ ၈ မိနစ် ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(4) Godzilla: King of Monsters
Japanese Fiction Character Godzilla ရုပ်ရှင်ရဲ့ အဆက်ဖြစ်တဲ့ Godzilla: King of Monsters ကိုတော့ မေ (၃၀) ရက်မှာ ရုပ်ရှင်ရုံတွေပေါ် ရောက်လာတော့မှာပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအရ Godzilla: King Of Monsters မှာ Godzilla ဟာ ရှေးဟောင်း Monster ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Mothra, Rodan, King Ghidorah တို့နဲ့ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ရမှာပါ။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် အက်ရှင်ကားတွေကို နှစ်သက်သူတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ရုပ်ရှင်ကြာချိန်ကတော့ ၂နာရီနဲ့ ၁၂ မိနစ်ပါ။
(5) The Secret Life of Pets Part 2
၂၀၁၆ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Secret Life of Pets ရဲ့ အဆက်ဖြစ်တဲ့ The Secret Life of Pets Part2ကို မေ(၃၀)မှာ စတင်ကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာပါ။ အဓိကဇာတ်လိုက် Max နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ အခြား အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ အကြောင်းကို တင်ဆက်ထားတာပါ။ လူတွေက အလုပ်သွား၊ ကျောင်းသွားတဲ့ အခါ အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို ရသမျိုးစုံနဲ့ ရှုစားရမှာပါ။ ကြာမြင့်ချိန်ကတော့ ၁နာရီနဲ့ ၃၂ မိနစ်ပါ။
ဒါကတော့ မေလမှာ ထွက်ရှိမယ့် ရုပ်ရှင်တွေထဲက ပရိတ်သတ်အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျလောက်မယ့် Duwun ရဲ့ Selection တွေပါ။ အခြား ရုပ်ရှင်တွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ကဲ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တို့ရေ.. ကြည့်ဖို့ အသင့်ပဲလား?